VIDEO:Xaasaskii & caruurtii Bin Ladin oo markii ugu horeysay saxaafada la tusay – SBC
VIDEO:Xaasaskii & caruurtii Bin Ladin oo markii ugu horeysay saxaafada la tusay
Posted by editor on April 11, 2012 Comments
Warbaahinta ayaa markii ugu horeysay waxay fursad u hashay inay booqdaan halka ay ku nool yihiin qoyskii hogaamiyihii Al-Qaacida Osama Bin Ladin ee bishii May ee sanadkii hore lagu dilay hawlgal qarsoodi ah oo ka dhacay gudaha wadanka Pakistan.
Telefishinka Al-Carabiya ee fadhigiisu yahay magaalada Dubai ee dalka Isu taga Imaaraadka Carabta ayaa noqdey warbaahintii ugu horeysay ee ka soo waranta nolasha qoyskii Bin Ladin gaar ahaan xaasaskiisii, caruurtii uu dhaley iyo kuwa uu awoowe uu ahaa oo ay dhaleen awlaadiisa, iyadoo koox wariyeyaal ka socota Tv-gaasi ay booqdeen guri xabsi ahaan loogu hayo qoyskaasi oo ku yaal gudaha Pakistan.
Qoyska hada waxaa gacanta ku haysa xukuumada Pakistaan, waxaana ah ay ku sugan yihiin goobtaasi mudo sanad ku dhaw iyagoo sugaya aayaha mustaqbalkooda sida laga yeelayo gaar ahaan eedeymaha loo haysto ee ku aadan inay ku soo galeen oo ay ugu noolaayeen dalka Pakistan qaab sharci daro ah.
Goobta lagu hayo qoyskan waa meel aad loo adkeeyey amaankeeda waxaa dhooban oo ilaalo ka haya ciidamada amaanka Pakistan.
Telefishinka Al Arabiya wuxuu u helay fursad in uu gudaha u galo gurigaasi oo uu muuqaalo ka soo duubo qoyskii Bin Ladin, iyo sida ay u nool yihiin.
Guriga ay degan yihiin qoyskan wuxuu ku yaal magaalada Islamabad ee caasimada Pakistan, waxaana ka muuqanaya muuqaalka filimkaasi caruurtii Bin ladin uu dhaley gaar ahaan kua yar yar iyo kuwii uu awoowaha u ahaa oo aanay ka qasneyn lana socon waxa dunida ka dhacaya iyo sida ay u yihiin dad aad loo xiisenyano warkooda oo isaga jira ciyaar iyo baashaal.
Sadexdii xaas ee Bin Ladin ka dhintey ee la noolaa xiligii lagu dilayey magaalada Abbottabad ee waqooyiga Pakistan ayaa muuqaalla video-ga ka muuqanaya iyagoo xijaaban oo qure’aan akhrisanaya.
Dawlada Pakistani waxay sheegtey inay xirtey qoyska Bin Ladin waxaana ay xabsi guri ku jiraan mudo 45 maalmood iyagoo la doonayo in la qaado dacwado la xiriira sifada ay dalkaasi ku joogeen ama ku soo galeen, waxaana ka mid ah qorshaha dawlada Pakistan in dadkan ay u musaafuriso dalalkii ay u dhasheen sida uu sheegay Mohammed Amir Khali loo Qareen u dhashay dalka Pakistan oo qoyskan difaacaya.
Pakistan waxay xukun ku riday sadexda hablood ee Bin Ladin ka geeriyoodey iyo laba gabdhood oo uu dhaley kuwaasi oo sidoo kale lagu ganaaxay in kiiba uu bixiyo lacag u dhiganta 110 doolar, laakiin qareenkoodu wali ma go’aansan in uu xukunka dawlada ee ganaaxa & xabsiga isagu jira uu ka qaato racfaan.
Sadexda xaas ee la hayo ee Bin Ladin ka geeriyoodey laba waxay u dhasheen dalka Sacuudiga halka midda kale oo aheyd xaaskii ugu yared ee Cusaama ay u dhalatey wadanka Yemen taasi oo lagu magacaabo Amal Al-Sadeh.
Qareen Khalil wuuxuu sheegay in dawlada Yemen ay ogolaatey in haweenaydaasi dib loogu soo celiyo dalkeeda balse waxaa jira wadahadal lala leeyahay saraakiisha Sacuudiga.
Saudi Arabia waxay ka xayuubisay jinsiyada ama dhalashada dalkaasi Osama Bin Ladin sanadkii 1994-kii xiligaasi oo uu bilaabay oraahyo mucaaradad xambaarsan oo uu kaga soo horjeestey qoyska Boqortooyada Sacuudiga.
Qoyska Bin Ladin ee ay hayaan ciidamada Pakistan tan iyo bishii May markii la dilay Cusaama waxay ka kooban yihiin 16 qof.
Haweenayda ugu yar xaasaskii Bin Ladin ee u dhalatey Yemen ee lagu magacaabon Amal Al-Sadeh, waxay ka mid tahthe youngest widow, and her four children were among 16 people detained by Pakistani authorities after the raid, which also included two other wives.
Dawlada Pakistan waxaa ku noqdey waji gabax ayna ka qaado caro xoogan weerarkii lagu qaarijiyey Bin Ladin oo ay ku andacootey inaan lagu soo wargelin ka hor intii aan la qadin.
Wareysiyada dhanka baaritaanka ku saleysan ee lala yeeshay qoyska Bin Ladin gaar ahaan xaasaskiisa waxay muujinayaan in Bin Ladin sagaal sano uu ku noolaa Pakistan isagoo shan guri oo kala duwan ka degay, afar caruur ahna ay ugu dasheen gudaha Pakistan.
Baaritanada lala yeeshay Amal Al-Sadeh oo ah afada ugu yar hablihii uu ka baxay Bin Ladin waxay ku sheegtey in laba ilmood oo ka mid ah afarta caruur ee Bin Ladin ugu dhalatey gudaha Pakistan ay ku dhasheen Isbitaalada dawlada Pakistan, arintaasi oo la yaab ku abuurtey sarakiisha sirdoonka Pakistan.
Al-Sada waxay ku sheegtey baaritaanka lala yeeshay in Isbitaalada ay ku dhashay ay ku jirtey laba ilaa sadex saacadood oo kaliya isla markaana ay adeegsatey document been abuur ah oo ay ku daahsaartey shakhsiyadeeda.
Cusama Bin Ladin wuxuu guursadey Amal Al-Sadeh sanadkii 2000 iyadoo guurka haweenaydaasi uu ka dambeeyey Aabaheed oo ah oday caan ka ah Yemen oo Bin Ladin gabadhiisa ugu darey si uu ugu sharfo, waxaana haweenadaasi ay u socdaashay dalka Pakistan sanadkii 2000 iyadoo uga gudubtey Afgaansitaan si ay ula noolaato saygeeda cusub oo sanad ka dib markii uu dhashay weerarkii September 11 aduunka ka noqdey ninka loogu doondoonista badan yahay.
Link-ga video-ga ka daawo muuqaalka filimka laga duubay qoyska Bin Ladin.HALKAN RIIX SI AAD U DAAWATO VIDEO
walahi wa wax lalayaabo howshaan
K k k k masakinta maxa laga rabaa odaygi haday kacuneen